कलाकारको पारिश्रमिक वृद्धि, हचुवाको डिमाण्ड कि स्टारडम ? – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsFeature Newsकलाकारको पारिश्रमिक वृद्धि, हचुवाको डिमाण्ड कि स्टारडम ?
October 26, 2018 sutraentertainment Feature News, Gossip, Kollywood, News 0
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट – नेपाली फिल्मका कलाकारको लाइफ स्टाइल हेर्दा अहिले त जो कोहीलाई पनि कलाकार बन्छु भन्ने सोच आउला । किनकी, कुनै कलाकार छैनन् जसको पारिश्रमिक सस्तो होस् । अब त ५० लाखसम्म पनि लिएको कुरा ।
संचारमाध्यममा खबर हेर्ने हो भने दैनिक कलाकारको पारिश्रमिक मात्र बढेको खबर आउँछ । अहिले अभिनेता पल शाहको पारिश्रमिकको कुरा जोडतोडका साथ चलेको छ । सुरज सुब्बाको फिल्म खेल्न पलले २० लाख लिएका छन् । पलले २० लाख पारिश्रमिक लिएपछि यो सिनेमा सिंगै बोक्ने क्षमता राख्न पर्छ । सिनेमाको व्यापार हेर्दा पल आफ्नै स्टारडमले चलेका छैनन् । तर, उनलाई २० लाख नदिएसम्म निर्मातालाई धरै भएन ।
अभिनेता आर्यन सिग्देल हिट हुँदा ८ लाखसम्म लिन्थे । अहिले त उनी फ्लप छन् । उनी आफैले बनाएको सिनेमा कायरा पनि चलेन । आर्यनको जमाना सकिदैछ । तर, उनलाई विकासराज आचार्यले १२ लाख दिएर सिनेमा खेलाउँदैछन् ।
आर्यनले १२ लाखको ३ गुणामात्र रिटर्न गरेर हुँदैन, निर्मातालाई मुनाफा दिलाउने क्षमता पनि राख्नपर्छ ।
नेपाली सिनेमामा अहिले कलाकारको पारिश्रमिक बढेको बढै छ । तर, सिनेमाका लागि कलाकारले गम्भिर भएर मिहिनेत गरेको कही कतै सुदिनैन । कलाकारले एउटा सिनेमाकै लागि आफूलाई बदले भन्ने त झनै सुनिदैन । कपाल पाल्नु, शरीर बनाउनु मात्र गेटअप परिवर्तन हो भन्ने वुझ्छन् कलाकार ।
आज लिएको पारिश्रमिक भोली अझै कम भयो भने त्यसले कलाकारलाई भलो गर्दैन । आज त्यती मात्र पारिश्रमिक लिन आवश्यक छ, जति भोली लिदा पनि सुहाओस् । तर, चलेको बेला दिइहाल्छन् भनेर आँखा चिम्लिएर पारिश्रमिक डिमाण्ड गर्ने क्रम बढेको हो । २० देखि ५० लाखसम्मको डिमाण्ड यही हचुवाको भरमा आएको हो भन्न सकिन्छ ।
नेपाली फिल्मको बजार सानो छ । बजार बढ्न अझै समय लाग्छ । बर्षमा चल्ने सय फिल्ममा ५ वटा सिनेमाका निर्माता मख्ख पर्छन्, अरुको ढाड सेकिन्छ । तर, फरक कसैलाई परेको छैन । सिनेमाको बजार वृद्धिमा कसैले ध्यान दिएको छैन । कलाकार त पारिश्रमिकको रटानमै रुमलिएका छन् । दर्शक उनीहरुको पारिश्रमिकले होइन, कामले फिल्म हेर्न आउने हुन् । तर, काम फरक गरौ भन्ने कसैलाई पनि छैन ।
गाउँघरतिर हचुवाको भरमा बढेको जंगाको भाउ जस्तै अहिले कलाकारको भाउ पनि हचुवामै बढेको छ । यसैले निर्माताले सजिलै कलाकारलाई लिएर सिनेमा बनाउँन सक्ने अवस्था छैन । तर, कलाकार भने स्टारडमको घमण्डमा रुमल्लिएर हचुवाको पारिश्रमिक मागिदिएका छन् । पाए ठिकै छ, नपाए पनि ठिकै छ भन्ने टाइपको ।
आर्यनलाई विकासले च्यापे, दिनेशले छाडे
कवितालाई आफ्नै प्रेमकथामा सफलता
रिलिजको संघारमा ” चंगा चेट ” का तिन फरक पोस्टर
चर्चित म्युजिक भिडियो मोडल तथा नायक पल शाहको दशैं टिका ( फोटो फिचर ) नायक निखिल उप्रेती र नायिका संचिता लुइँटेलको दशैँ टिका ( फोटो फिचर )
निरुताको ५ लाख पारिश्रमिकः कामको कदर कि उच्च डिमाण्ड
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- नेपालमा कलाकारले महंगो पारिश्रमिक डिमाण्ड गर्न थाले भने कलाकारको क्रेज सकिन्छ र त्यो हराउँछ भन्ने गरिन्छ । औलामा नै गन्न सकिने कलाकारको कुरा छाड्ने हो भने धेरै कलाकार यसकारण पनि पारिश्रमिक चर्को डिमाण्ड गर्न […]
कलाकारको फेसबुक लाइक बढ्यो, हल क्रेज घट्यो
February 6, 2019 Tulasa Karki Feature News, Gossip, Kollywood, News 0
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- नेपाली कलाकारको बारेमा कुरा गर्नु अघि एकैछिन बलिउडका कलाकारको कुरा गरौ । बलिउडका सुपरस्टार साहरुख खानको ट्विटरमा ३ करोड भन्दा बढी फलोअर्स छन् । साहरुखलाई ट्विटरको त बादशाह नै मानिन्छ । तर, उनले […]